Mampiseho ny tantara ao anaty mahatalanjona ao amin'ny indostrian'ny jiro LED! - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
an-trano > Vaovao momba ny indostria > Mampiseho ny tantara ao anaty mahatalanjona ao amin'ny indostrian'ny jiro LED!
"Mahazo tombony daholo izao tontolo izao" dia taratry ny fivoaran'ny indostrian'ny jiro LED ankehitriny. Tao anatin'izay taona lasa izay, ny "varotra avo sy tombony be" amin'ny tsena LED dia nahasarika orinasa maro hiditra, saingy tsy izay rehetra miditra amin'ny indostria no afaka manaraka ny lalàna. , Taorian'ny taona maro nisian'ny fampandrosoana, ohatrinona ny "adaladala" ananan'ny indostrian'ny jiro LED? Ohatrinona ny fatiantoka entin'ny indostrian'ny jiro?
Mikasika ireo indostria izay "catty" · Tetik'asa fanolorana tetikasa
Maloka ny tolotra tetikasa
Na inona na inona indostria misy anao, misy foana ny "lalàna adaladala" sy "miafina". Avy eo, karazana "adaladala" inona no misy ao amin'ny indostrian'ny jiro? Ity lahatsoratra ity dia mamelabelatra ny lafiny efatra amin'ny tolo-kevitra amin'ny tetikasa, ny fanamarinana, ny tolo-kevitra sandoka, ary ny fanaovana hosoka, ary mandinika ny tsiambaratelo ao ambadik'ireny "saka sy tetika" ireny.
Tetikasa jiro monisipaly, jiro an-dàlana, jiro ara-barotra ary tetik'asa hafa dia nanjary ampahany lehibe tamin'ny fampiharana sy fampiroboroboana ny jiro LED, fa tetikasa injeniera marobe ary koa tetikasan'ny tanàna no tena manjombona sy maloto.
Ny fifandraisana dia zava-dehibe kokoa
Fantatry ny indostrian'ny indostria ihany koa fa be ny "lalàna miafina" ao ambadiky ny tolo-kevitra momba ny tetikasa: Satria misy ambaratonga maro amin'ny famolavolana injeniera, ny orinasan-jiro dia tsy maintsy miatrika ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta, ny mpanao mari-trano ary ny injenieran'ny teknika raha te hahazo tetikasa iray izy ireo. Ny antoko fananganana sy ny endrika anatiny ary ny lafiny hafa, noho izany dia ilaina ny mitandrina ny fifandraisana amin'ny ambaratonga rehetra rehefa manao tolotra. Tsy maintsy ihodivirana izany amin'ny fananganana manam-pahefana sasany izay nampiroborobo ny tetikasa ho tombontsoan'ny tena manokana, ary misy ny olona manao raharaham-barotra ambany latabatra mba hahazoana vola. Vokatr'izany, na ny fividianana ny governemanta na ny tetik'asa fananganana, ny firaisana tsikombakomban'ny tompon'andraikitra sy ny mpandraharaha, amin'ny alàlan'ny fanodikodinam-bola amin'ny tolo-bidy, dia niteraka kolikoly toy ny tolo-bidy diso, fanaovana hala-bato ary fifanolanana.
Fiarovana eo an-toerana
Ny faritany sy ny tanàna sasany dia nampihatra fiarovana avy eo an-toerana rehefa nanolotra vidy ny tetikasa. Eo ambanin'ireo fepetra mitovy amin'ny kalitao sy ny vidiny, ny fividianana vokatra azo avy amin'ny vokatra eto an-toerana dia toa lasa "fitsipika miafina" ho an'ny governemanta eo an-toerana hanohana ireo orinasa jiro ao an-toerana. Raisin'ny governemanta ny tolotra fampirantiana LED any Huizhou City, Guangzhou tamin'ny taona 2013, ohatra, raha ny angom-baovao mifandraika amin'izany, tetikasa 16 ihany no azon'ny orinasa eo an-toerana ao Zhongshan City, ary ny ambiny dia azon'ny orinasa LED eo an-toerana.
Mikasika ireo indostria izay "tsy sarotra" · Lahatsoratra fanamarinana
Ambaratonga fanamarinana ambany
Tamin'ny 2014, taorian'ny fanavahana ny fizahana nasionaly sy ny fampiatoana ireo marika malaza sinoa, ny "lalàna momba ny mari-barotra" vao nohavaozina dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1 mey tamin'io taona io ihany. Ny teny hoe "mari-pamantarana fanta-daza any Sina" dia voarara tsy hampiasaina amin'ny entam-barotra, fonosana na kaontenera entana, na amin'ny dokam-barotra, fampirantiana ary hetsika ara-barotra hafa. Midika koa izany fa ny "mari-pamantarana fanta-daza" dia tsy azo ampiasaina intsony amin'ny fampiroboroboana ny fonosana vokatra. Na izany aza, nitsidika ny tsena ny mpanoratra ary nahita fa mbola misy ny vokatra sasany eo ambanin'ny sorabavenon'ny "mari-barotra fantatry ny China". Ny "fanamarinana mikorontana" sy ny "fanamarinana sandoka" dia voarara imbetsaka tato anatin'ny taona vitsivitsy, izay nahatonga ny mpanjifa hanana fisalasalana lehibe momba ny fahamendrehan'ity fiasa manome antoka azo antoka ity.
Mikasika ireo indostria izay "catty" sy fenitra diso
Tolo-kevitra noforonina: mitahiry vola koa miady
"Ny wattage virtoaly virtoaly dia lasa fitsipika tsy voatonona ao amin'ny indostria." Nilaza ny indostrian'ny indostria fa amin'ny maha mpanamboatra azy dia mazava amin'ny ankapobeny raha toa ka mamoaka jiro LED misy wattage ampy izy ireo. Fantatra fa, mifanaraka amin'ny fitsipika mifandraika amin'izany, ny lesoka herinaratra ao amin'ny takamoa LED ao anaty na mihena folo isan-jato dia mety, izany hoe, raha isaina amin'ny 3 watts ny vokatra dia mety ho eo anelanelan'ny 2,7 ​​watt sy 3,3 watt ny jiro. Raha mihoatra io fenitra io dia luminaire mahazatra virtoaly. Fa ny vokatra "virtoaly virtoaly" dia tsy zava-baovao eo amin'ny tsena, ary ny olona amin'ny indostrian'ny jiro dia efa zatra izany hatrizay.
Amin'ny ankapobeny, ny mpamokatra dia hamokatra karazana jiro LED roa mitovy endrika aminy, ny iray amin'izy ireo dia novokarina ho jiro feno watt, ary somary avo kokoa ny vidiny. Jiro iray natao ho ambany noho ny watts dia manana vidiny ambany ihany. Fantatry ny mpivarotra amin'ny ankapobeny fa ny mpanamboatra dia mamoaka jiro LED kely kokoa noho ny wattage. Na izany aza, raha te hanisy fahasamihafana dia aleon'ny mpivarotra mividy vokatra ambany wattage.
Mikasika ireo indostria izay «catty» sy lahatsoratra sandoka
"Li Kui" dia namaky ny fanaovana sandoka "Li Gui" niseho, mangina ireo orinasa kely sy salantsalany ary nanomboka niasa ireo orinasa lehibe
Olana eran'izao tontolo izao ny fanaovana hosoka, ary nanjary "loza roa lehibe indrindra manerantany manerantany taorian'ny fanondranana zava-mahadomelina".
Ny fanaovana hosoka dia mandratra mivantana ny orinasa voafitaka, izay manimba ny tombontsoan'ny mpanjifa ary, amin'ny tranga matotra, dia mety hampidi-doza ny fiarovana manokana ny mpanjifa. Ho an'ny mpanamboatra dia fatiantoka tsy azo tsapain-tanana kokoa ny fanaovana sandoka. Ny fampiasana vokatra sandoka sy ambany dia ambany noho ny vokatr'izy ireo dia mitovy amin'ny manimba ny marika anaovany azy. Ireo marika sandoka amin'ny ankapobeny dia manana ny lazany eo amin'ny sehatry ny indostria. Ohatra, ny "Philips" sandoka, ny "NVC" sandoka, ny "OP" sandoka sns dia miseho matetika amin'ny indostrian'ny jiro.
Ny fanadihadiana iray dia naneho fa ny fifantohana sy fetran'ny marika amin'ny tsena jiro sinoa ankehitriny dia somary avo, mifototra amin'ny anarana lehibe iraisampirenena (Philips, Panasonic, Osram, TCL, Samsung, sns.) Ary marika taloha teo an-toerana Sinoa (Opu, NVC , Foshan, sns.) Jiro, sns.). Ny marika fanta-daza any Chine, ny avo kokoa ny mety hosokaina, ary ny isan'ny sy ny sandan'ny sandoka.
Ny fanaovana hosoka vokatra dia tena matotra na eo aza ny indostria. Na izany aza, tranga sandoka maromaro no nipoaka tao amin'ny indostrian'ny jiro andro vitsy lasa izay, ary nanosika ny Op Lighting sy ny NVC Lighting hatrany aloha.
Tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity dia nisy tranga tranga sandoka iray tany Jiaxing, Zhejiang, izay mitentina 170.000 yuan. Ny vokatra sandoka dia ny fantsom-bozaka OP. Nahatratra 7980 ity fantsona "OPPLE" ity, nisy famokarana mahery, fonosana tsotra ary fonosana ivelany. Tsy misy marika eo amin'ilay boaty. Taorian'ny famotopotorana dia hita fa ny vokatra rehetra dia manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona "OPPLE" voasoratra anarana.
Ankehitriny io fisehoan-javatra amin'ny fisandohana vola io dia niparitaka tamin'ny Internet na tamin'ny Internet (Internet). Misy ihany koa ny olona amin'ny Internet mivarotra jiro eo ambanin'ny fanevan'ny fianakaviana hafa, saingy somary banga ny tsena amin'ny Internet. Amin'izao fotoana izao dia tsy dia lehibe ny fiantraikan'ny fanaovana sandoka amin'ny Internet amin'ny orinasa, ka tsy manadino izany ny orinasa.
Fampiasana hosoka ny anaran'ny ozinina, ny adiresin'ny orinasa ivelan'ny tranokala
Ny hoe "manokatra sampana" dia mety ho fomba fanao mahazatra amin'ny fanaovana hosoka ankoatry ny fanaovana hosoka amin'ny vokatra. Raiso ohatra ny Maoyuan Power Supply. Tamin'ny taona 2011, nisy fivarotana Zhongshan Maoshuo Power Supply niseho. Mody nivarotra Moso Power Products ilay fivarotana. Taorian'ny nahafantaran'ny mpanjifa fa misy Moso Power Supply sandoka ao Zhongshan, nanantena ny handoa torohevitra ny Moso Power, ny taratasy nataon'ny mpisolovava, ny dokam-barotra ary ny fomba hafa nanakana an'io fandikan-dalàna io, saingy kely dia kely ny valiny. Tamin'ny farany, ny tena Moso Power Supply dia nisafidy ny hanokatra fivarotana mivantana hanoloana ny Moso Power Supply tany am-boalohany. Na izany aza, nanamarina ilay mpanao gazety fa tsy nampiato ity fihetsika ity ny Moso Power sandoka, fa namindra ny toeran'ny fivarotana fotsiny.
Raha ny marina, tsy ireo orinasa voatanisa ao toa ny Moso Power ihany, fa orinasa jiro sy jiro maro kosa no hihaona amin'ny "varavaran'ny sampana" Ohatra, Guangdong Juke Lighting Co., Ltd. dia nihaona tamin'ny fisandohana ihany koa tamin'i XX Juke Lighting.
Fifandonana eo amin'ny marika sy ny anaran'ny orinasa
Amin'ny indostrian'ny jiro, tsy dia misy tranga "hosoka", fa telo taona lasa izay, NVC Lighting (Huizhou NVC Optoelectronics Technology Co., Ltd.) nitory ny "Shanghai NVC" ary ny tranga "Jiangsu NVC" koa nahatonga ny indostria tamin'izany. fotoana. s ahiahy. Notaterina fa tamin'ny 2011, ny NVC Lighting dia nametraka fitoriana tamin'ny fitsarana noho ny fampiasana hosoka ny marika amaritan'ny "Shanghai NVC Lighting Co., Ltd." ary "Jiangsu NVC Lighting Co., Ltd.". Vokatr'izany, ireo orinasa roa mpandika lalàna Rehefa very ny fitoriana dia nangataka ny hampitsaharana avy hatrany ny fanitsakitsahana ny mari-pamantarana sy ny fifaninanana tsy ara-drariny, ary voaheloka hanonitra ny fahazavana NVC.
Marika mitovy amin'izany: ny anaran'ny filalaovana ny "edge edge"
Raha ny lalàna momba ny mari-pamantarana ankehitriny dia iray ihany ny tsy fitovizan'ny teny, na homophone amin'ny teny sinoa izy io. Sarotra ny mamaritra raha manitsakitsaka ny lalàna momba ny mari-pamantarana izy io, raha tsy marika nasionaly.
Ny anaran'ny marika an'ny mpanamboatra sasany dia tena mitovy amin'ny marika tany am-boalohany, ary mitana andraikitra lehibe izy ireo. Ny mpanamboatra sasany izay milalao ny "baolina manala sisiny" dia ao amin'ilay faritra, anarana, fomba amam-bidy ary ny vidiny ary tsy dia kely ny fiatraikany amin'ny orinasa. Amin'izao fotoana izao, ny fikorianan'ny mpanjifa sasany eo am-pelatanan'ny ankolafy hafa dia voakasiky ny vidiny indrindra, nefa misy tranga maro hafa koa satria diso ny eritreritra ireo mpivarotra fa ny mpamokatra milalao ny "ball de vide" no marika voalohany.
:Ny mpiasan'ny orinasa Dengfeng Company dia nahazo ny medaly asa voalohany tamin'ny volana mey tao amin'ny faritanin'i Quannan any amin'ny faritanin'i Jiangxi